Joshụa 20 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Obodo mgbaba dị iche iche (1-9)
20 Jehova wee sị Joshụa: 2 “Gwa ndị Izrel, sị, ‘Họtaranụ onwe unu obodo mgbaba dị iche iche+ otú ahụ m gwara Mosis ka unu mee. 3 Onye gburu mmadụ* n’amaghị ụma ma ọ bụ n’ọghọm ga-agbaga ebe ahụ. Ebe ndị ahụ ka unu ga-agbaga ka onye na-abọrọ onye nwụrụ anwụ ọbọ ghara inweta unu.+ 4 Onye ahụ gburu mmadụ ga-agbaga n’otu n’ime obodo ndị ahụ,+ guzoro n’ebe e si abanye n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ+ gwa ndị okenye obodo ahụ otú ihe si mee. Ha ga-anabatakwa ya n’obodo ahụ ma nye ya ebe ọ ga-ebi. Ya na ha ga-ebikwa. 5 Ọ bụrụ na onye na-abọrọ onye ahụ nwụrụ anwụ ọbọ achụrụ ya bịa, ha ekwesịghị inyefe onye ahụ gburu mmadụ n’aka ya, n’ihi na o gburu mmadụ ibe ya n’ọghọm,* ọ bụghị na ọ kpọrọ ya asị.+ 6 Ọ ga-ebikwa n’obodo ahụ ruo mgbe nzukọ unu ga-ekpe ya ikpe.+ A chọpụta na ọ ghọrọ ya ọghọm, ọ ga-ebi ebe ahụ ruo mgbe nnukwu onye nchụàjà nọ n’oge ahụ nwụrụ.+ Ọ bụ mgbe ahụ ka ọ ga-alaghachi n’obodo o si gbapụ, banye n’obodo ya nakwa n’ụlọ ya.’”+ 7 N’ihi ya, ha họọrọ Kidesh+ nke dị na Galili n’ala Naftalaị bụ́ ugwu ugwu, họrọkwa Shikem+ nke dị n’ala Ifrem bụ́ ugwu ugwu, na Kiriat-aba,+ ya bụ, Hebrọn, nke dị n’ala Juda bụ́ ugwu ugwu. 8 Ná mpaghara Osimiri Jọdan, n’ebe ọwụwa anyanwụ Jeriko, ha si n’ebo Ruben họrọ Biza+ nke dị n’ala ịkpa dị larịị, sikwa n’ebo Gad họrọ Remọt+ nke dị na Gilied, sikwa n’ebo Manase+ họrọ Golan+ nke dị na Beshan. 9 Obodo ndị a ka a họtaara ndị Izrel niile nakwa ndị mbịarambịa ha na ha bi, ka onye ọ bụla gburu mmadụ* n’amaghị ụma gbaga n’otu n’ime ha,+ ka onye na-abọrọ onye ahụ o gburu ọbọ ghara igbu ya tupu nzukọ unu ekpee ya ikpe.+
^ Ma ọ bụ “n’amaghị ụma.”